tamin’ny fanavakavaham-bolon-koditra sy nikendry fampiombonana sy fandriampahalemana ary fifanampiana tatsy Afrika Atsimo sy nielipantrana teto ambonin’ny tany. Nentin’ny Masoivohon’i Afrika Atsimo Tarihin-dRtoa Maud Vuyelwa Dlomo eto Madagasikara nanamarihana izany ny fizarana vatomamy sy fanampiana ary kojakoja toy ny kitapo sy fitafy ilain’ireo ankizy miisa 30 tezaina etsy amin’ny toby Fanambinana Nanisana. Niara-nientana tamin-dRtoa Maud Vuyelwa Dlomo ny talen’ny serasera ao amin’ny vondrona Vidy Varotra, Rtoa Rakotoson Sylvia sy ny tale lefitry ny orinasa SBM Banque, Rtoa Rajoelisolo Haingo Tiana. Nihazo ny fonjan’Antanimora niaraka tamin’ny fikambanana tsy miankina Blessing Convenant. Nisy ny fitiliana ireo ankizy voafonja tsy ampy taona, raha toa ka efa nisy ny fifaninanana baolina ny hariva izay natrehin’ny masoivohon’i Afrika atsimo sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy. Nanolotra fanomezana ho an’ireo voafonja ireo mpiara-miasa rehetra ho fiaraha-mientana tamin’ny “Mandela day”. Nizarana sakafo sy vatomamy ary ronono ireo ankizy tsy ampy taona 125 mianadahy. Notolorana fanomezana ary niampy vary sy savony kosa ireo ireo beantitra, renim-pianakaviana miisa 475. Novoizin’ny Masoivoho Afrikanina Tatsimo sy ireo delegasionina notarihiny ny hananan’ny tsirairay toe-tsaina miabo, fahatokisan-tena ary fitiavana te hivoatra, izay toe-tsaina nananan’i Nelson Mandela sy novoiziny fahavelony dia ny fitiavana mifanampy.
Toky R sy Tsirinasolo